Izinto eziBalulekileyo ezi-12 zeKhaya laseKhaya | Martech Zone
Izinto ezili-12 eziBalulekileyo zePhepha leKhaya
NgeCawa, nge-29 kaJanuwari 2012 NgoLwesibini, Meyi 3, 2016 Douglas Karr
I-Hubspot ngokuqinisekileyo iyinkokeli ekuqhubeni umxholo wokuqhuba isicwangciso sokuthengisa esingenayo, andikaze ndibone enye inkampani ikhupha amaphepha amhlophe, iidemo kunye neencwadi. Hubspot ngoku ihambisa i infographic kwizinto ezili-12 ezibalulekileyo kwiphepha lasekhaya.
Ikhasi lasekhaya kufuneka linxibe iminqwazi emininzi kwaye likhonze abaphulaphuli abaninzi abavela kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo. Ayifani nephepha elinikezelweyo lokufika, apho izithuthi ezivela kwisitishi esithile kufuneka zinikwe umyalezo othile wokuthatha isenzo esithile. Ukufika kwamaphepha kunereyithi ephezulu yokuguqula kuba ijolise kwaye ibaluleke kakhulu kubakhenkethi.
Siyabanceda abathengi bethu ekwakheni amaqhinga entengiso angenayo… kwaye kufuneka nditsho ukuba ndiyacinga Hubspot ndiphose uphawu kule infographic… kukho izinto eziphambili kunye nezicwangciso eziphosiweyo kule infographic:
Iinkcukacha zoqhakamshelwano -Iifowuni-zentshukumo zibalulekile kulwazi, kodwa ayinguye wonke umntu ofuna ukucofa idemo okanye izixhobo ezongezelelweyo. Ngamanye amaxesha umthengi wakho ukulungele ukuthenga kwaye ufuna nje a inombolo yomnxeba or ifomu yokubhalisa ukuba uqalise.
Iimpawu zeNtlalo -Ukubaluleka kweendaba zosasazo ekukhuliseni umxhasi akunakuthathelwa phantsi. Ngamanye amaxesha abantu baya kuhlala kwindawo yakho, kodwa abakakulungeli ukuthenga okwangoku… ke baya kukulandela kuFacebook, kuGoogle + okanye kuTwitter ukuze bazi ngcono.
Incwadana yokubhaliselwa - mhlawumbi eyona nto ithathwe kancinci kuyo nayiphi na iphepha lasekhaya kukubhaliswa kweleta. Ukubonelela ngeendlela zethemba lokungena kwiidilesi ze-imeyile kwaye ziphindaphindwe ichukumisiwe ngeendaba, izibonelelo kunye nolwazi oluvela kwi-brand yakho alunakuthelekiswa nanto. Ukufaka idilesi ye-imeyile kubaluleke kakhulu-qiniseka ukuba ilula kwaye icacile kwiphepha lakho lasekhaya.
Ndingaphikisana nokusebenzisa igama Iimbonakalo kwi # 5 ngokunjalo. Kuqinisekisiwe kaninzi ukuba abasebenzisi baninzi utsaleleke kwizibonelelo kunakwimpawu. Ukuthetha ngengxelo yakho entsha-engxangxasiyo ayibalulekanga… kodwa ukubonisa idatha onokuyibonisa ukuze inkampani ikwazi ukwenza imali!
Okokugqibela, iphepha lakho lasekhaya kufuneka lenzelwe amagama aphambili aya kuthi abhekise indawo yakho ngokufanelekileyo kwaye aqinisekise ukuba indawo yakho ifunyenwe njengoko ikhula ekuthandeni. I-SEO kufuneka ihlale idlala indima kuyilo lwekhasi lasekhaya kunye nophuhliso.
tags: izinto zekhasi lasekhayaUyilo lwekhasi lasekhayaizinto zekhayakwenziwa kanjanihubspot
Intetho yasimahla ayikhuseli igama lakho
Jan 30, 2012 kwi-4: 54 AM
Yinyani leyo! kwaye kwiintsuku nje ezimbini ubuyile ufumene uhlaziyo oluvela kuGoogle malunga nokubaluleka kwamaphepha okuhla. Ke ukuba umntu uqhuba umkhankaso wokuphucula ngaphandle kwephepha, kubalulekile ukuba noluhlu oluchanekileyo lwamagama angundoqo kunye nephepha elifanelekileyo apho loo magama angundoqo aya kusithatha khona.
NgoJanuwari 31, 2012 ngo-12:56 PM
Enkosi ngokwabelana ngobuchule bakho. Ndiyayiphinda inqaku lakho kwinto yobhaliso lwencwadana! Iyandimangalisa indlela endifanele ndimbe ngayo ukufumana imirhumo kwiinkampani endifuna ukuva kuzo.
NgoJanuwari 31, 2012 ngo-5:18 PM
Ndiyavuma ukuba enye yezona zinto zinkulu ezingekhoyo kweli phepha ziimpawu zentlalo. Ndiyakholelwa ukuba kufuneka kubekho iiseti ezimbini zemifanekiso yemidiya yoluntu kwiphepha ngalinye-enye yenkampani, imveliso okanye iwebhusayithi iyonke kunye nenye yephepha elithile okanye inqaku elindwendwelwa ngumsebenzisi.